Mayelana NATHI - Rizhao Feiqing International Trading Co., Ltd.
URizhao Feiqing International Trade Co., Ltd. usebenza ekukhiqizeni nasekuthengiseni izimpahla zemidlalo nemishini yokufaneleka, ukuhweba nokungenisa nokuthekelisa
I-Rizhao Feiqing International Trade Co., Ltd. itholakala eRizhao, uphiko lomsila lweSenins Peninsula nenhlokodolobha yezemidlalo yamanzi. Eminyakeni eyisikhombisa eyedlule, besilokhu sinikeze amakhasimende ethu imikhiqizo emihle, ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nensizakalo ezwakalayo yokuthengisa ngemuva.
Inkampani yethu isebenza kakhulu ngemishini yokuzivocavoca umzimba, izimpahla zezemidlalo, imikhiqizo yepulasitiki, imikhiqizo yensimbi engagqwali, i-Hardware nemishini kagesi, imikhiqizo yezinkuni nezindwangu zenaliti Ukuthengiswa kwezingubo, izicathulo nezigqoko, izimpahla zasehhovisi nezinto ezisetshenziswayo zekhompyutha; ukungenisa nokukhipha impahla ejwayelekile (ngaphandle kwaleyo enqatshelwe yimithetho nemithethonqubo, futhi leyo evinjelwe yimithetho nemithethonqubo ingasetshenziswa kuphela nelayisense) (kulawo maphrojekthi adinga ukuvunyelwa ngokomthetho, singenza kuphela imisebenzi yebhizinisi ngemvume yeminyango efanele).
Sine umkhiqizo omuhle futhi yokuthengisa professional kanye neqembu lobuchwepheshe. Njengamanje, kunabantu abangu-20 eqenjini. Inkampani yethu ingeyemboni yenkampani yemishini ye-Rizhao health Body, uma unentshisekelo kumikhiqizo nezinsizakalo zenkampani yethu, bheka phambili umyalezo wakho oku-inthanethi noma uthinte ukubonisana